Ezekiela 37: Ny Dikan’ireo Sampan-kazo ho An’i Joda sy Efraima
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabiyè Kannada Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mongol Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Miresaka sampan-kazo roa natambatra mba ho lasa sampan-kazo iray ny Ezekiela toko faha-37. Inona no dikan’izany?
Nilaza tamin’i Ezekiela i Jehovah fa ho lasa firenena iray ny Israelita rehefa tafaverina any amin’ny Tany Nampanantenaina. Midika koa io faminaniana io fa ho tafaray ny vahoakan’i Jehovah mandritra ny andro farany.
Nasain’i Jehovah naka sampan-kazo roa i Ezekiela mpaminany. Izao no nasainy nosoratana teo amin’ny sampan-kazo iray: “Ho an’i Joda sy ny zanak’Israely namany.” Izao kosa no nasainy nosoratana teo amin’ilay anankiray: “Ho an’i Josefa, sampan-kazon’i Efraima, sy ny taranak’Israely rehetra namany.” ‘Ho lasa sampan-kazo iray ihany’ izy ireo eny an-tanan’i Ezekiela.—Ezek. 37:15-17.
Iza ilay hoe “Efraima”? Avy amin’ny fokon’i Efraima i Jeroboama, mpanjaka voalohany teo amin’ny fanjakan’ny foko folo tany avaratra. Ny fokon’i Efraima no maro an’isa indrindra tamin’ireo foko ireo. (Deot. 33:13, 17; 1 Mpanj. 11:26) Taranak’i Efraima, zanak’i Josefa, ny fokon’i Efraima. (Nom. 1:32, 33) Nahazo tso-drano manokana avy tamin’i Jakoba rainy i Josefa. Mety àry raha natao hoe “sampan-kazon’i Efraima” ilay sampan-kazo nilazana ny fanjakan’ny foko folo. Lasa babon’ny Asyrianina ny vahoakan’io fanjakana io tamin’ny 740 T.K., izany hoe taona maro talohan’ny nanoratan’i Ezekiela an’ilay faminaniana momba ny sampan-kazo. (2 Mpanj. 17:6) Resin’ny Babylonianina ny Asyrianina tatỳ aoriana, ka niparitaka eran’ny Fanjakana Babylonianina ny ankamaroan’ny Israelita.
Resin’ny Babylonianina koa ny fanjakan’ny foko roa tany atsimo tamin’ny 607 T.K. Lasa babo tany Babylona ny vahoakan’izy io, ary lasa tany koa angamba ny olona sisa tavela tao amin’ny fanjakana tany avaratra. Avy amin’ny taranak’i Joda ny mpanjakan’ireo foko roa tany atsimo ireo. Tao Joda koa no nipetraka ny mpisorona, satria nanompo tao amin’ny tempoly tao Jerosalema izy ireo. (2 Tan. 11:13, 14; 34:30) Mety àry raha natao hoe “ho an’i Joda” ilay sampan-kazo nilazana ny fanjakan’ny foko roa.
Oviana ireo sampan-kazo roa ireo no natambatra ho iray? Tamin’ny 537 T.K., rehefa nody avy tany an-tsesitany ny olona sasany avy tamin’ny fanjakan’ny foko roa sy ny foko folo. Niverina tany Jerosalema ireo Israelita ireo mba hanorina indray ny tempoly. Tsy nisaratsaraka intsony izy ireo, fa lasa niara-nanompo an’i Jehovah indray. (Ezek. 37:21, 22) Efa niresaka momba an’izany koa i Isaia sy Jeremia mpaminany.—Isaia 11:12, 13; Jer. 31:1, 6, 31.
Inona no asongadin’io faminanian’i Ezekiela io? Asehon’izy io fa hataon’i Jehovah izay hahatonga ny mpanompony “ho iray.” (Ezek. 37:18, 19) Tanteraka amin’izao andro izao ve izany? Eny! Nanomboka tanteraka io faminaniana io tamin’ny 1919. Nanandrana nampizarazara ny vahoakan’i Jehovah i Satana talohan’izay, nefa nandamina sy nampiray saina azy ireo tsikelikely i Jehovah.
Nanantena ho lasa mpanjaka sy mpisorona miaraka amin’i Jesosy any an-danitra ny ankamaroan’ny mpanompon’i Jehovah tamin’izany. (Apok. 20:6) Toa an’ilay sampan-kazo ho an’i Joda izy ireo. Nihabetsaka anefa tatỳ aoriana ny olona nanantena hiaina eto an-tany, ka lasa tafaray tamin’ireo nanantena ho any an-danitra. (Zak. 8:23) Toa an’ilay sampan-kazo ho an’i Josefa izy ireo, ary tsy nanantena hiara-manjaka amin’i Kristy.
Miara-manompo an’i Jehovah ireo antokon’olona roa ireo. I Jesosy Kristy no Mpanjakany, ary antsoin’i Jehovah hoe ‘Davida mpanompony’ izy ao amin’ilay faminaniana. (Ezek. 37:24, 25) Nivavaka i Jesosy hoe “mba ho iray” ny mpanara-dia azy rehetra, ‘tahaka ny Ray izay tafaray aminy.’ * (Jaona 17:20, 21) Nilaza koa izy fa ho lasa “andiany iray” miaraka amin’ny “ondry hafa” ny ondry vitsy, izany hoe ny voahosotra. “Ho iray ihany ny mpiandry” azy ireo. (Jaona 10:16) Tena miray saina tokoa izao ny vahoakan’i Jehovah, na manantena ho any an-danitra izy ireo na manantena ho eto an-tany!
^ feh. 6 Nilaza fanoharana maromaro i Jesosy rehefa niresaka an’ilay famantarana ny fanatrehany. Momba ny “mpanompo mendri-pitokisana sy malina” no noresahiny voalohany, izany hoe ireo rahalahy voahosotra vitsivitsy mitarika ny vahoakan’i Jehovah. (Mat. 24:45-47) Niresaka momba an’izay rehetra manantena ho any an-danitra izy avy eo. (Mat. 25:1-30) Farany, dia niresaka momba an’ireo olona hanohana ny rahalahin’i Kristy sy hiaina eto an-tany izy. (Mat. 25:31-46) Izay hitranga amin’ireo manantena ho any an-danitra koa no tena noresahin’ilay faminanian’i Ezekiela. Marina fa tsy dia ampiasaina ilazana an’ireo manantena hiaina eto an-tany ny fanjakan’ny foko folo. Mampahatsiahy antsika anefa io faminaniana io fa miray saina ireo manantena hiaina eto an-tany sy ireo manantena ho any an-danitra.
Fanontanian’ny Mpamaky—Jolay 2016
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Jolay 2016
Raki-peo Fandikana raki-peo NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Jolay 2016
Fanontanian’ny Mpamaky—Desambra 2018
Fanontanian’ny Mpamaky—Novambra 2018
Fanontanian’ny Mpamaky—Jolay 2018
Fanontanian’ny Mpamaky—Aprily 2018